Fanadinana CEPE : Miisa 549 540 ireo mpiadina -
AccueilSongandinaFanadinana CEPE : Miisa 549 540 ireo mpiadina
Fanadinana CEPE : Miisa 549 540 ireo mpiadina
Efa vonona sy efa mipetrapetraka avokoa ny lamina sy ny zava-drehetra amin’ny fanatanterahana ny fanadinana CEPE. Hotontosaina anio amin’ireo ivon-toerana miisa 1873 sy efi-tranom-panadinana miisa 13 801 manerana an’i Madagasikara izany.
Araka ny fampitam-baovao, mahatratra 549 540 kosa ny isan’ireo mpiadina ka ny 48 amin’izy ireo dia ankizy manana fahasembanana. Ho voaaro tsara ireo toeram-panadinana rehetra manerana ny Nosy satria dia hisy mpitandro filaminana (polisy) hiambina izy ireny. Raha ny nambaran’ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, dia tsy tokony hanana ahiahy intsony ireo ray aman-dreny mahakasika ny fanadinam-panjakana amin’ity taona ity.
Ankoatra izay, mandray ny andraikiny tanteraka ny eo anivon’ny polisim-pirenena manoloana ny fanadinana CEPE. Efa eo am-pelatanan’izy ireo ny laza adina rehetra, ary izy ireo ihany no miantoka ny fahatongavan’izany eny amin’ireo foibem-panadinana. Ny polisim-pirenena ihany koa no miantoka ny fandriam-pahalemana mandritra ny fanadinana, ary manangona sy manatitra ireo taratasim-panadinana rehetra eny amin’ny foibem-pitsarana na “Centre de correction”. Miantoka ny fiambenana ny foibem-pitsarana sy ny foibem-pitan-tsoratra ihany koa izy ireo 24 ora amin’ny 24 ora. Tsy mitsahatra kosa ny anjara asan’ny polisy raha tsy mivoaka ny valim-panadinana.
Ankoatra izay, raha ho an’Antsirabe manokana, mahatratra 51 265 ireo mpiadina any an-toerana avy amin’ireo distrika miisa fito. Voalaza fa miisa valo indray ireo mpiadina manana fahasembanana ara-pahitana, 10 ireo moana sy marenina ary valo ihany koa ireo manana fahasembanana ara-batana sy saina. Efa vonona, araka izany ny eo anivon’ny Dren Vakinankaratra.
MN / Nary